Siisoowgii Kacaanku iigu bedelay Sitay ma noogtada | allsanaag
Siisoowgii Kacaanku iigu bedelay Sitay ma noogtada
Adeer Isaga oo Siisoow soo raacay ayaad intaad Sitaay ma noogto soo saarteen ugu sii daraysaan sii siko.
Waqtigii uu socday dagaalkii Soomaalida iyo Itoobiya ee 1977, ayaa gobolka Sanaag waxaanu ka raacnay gaari Siisoow ah, uu lahaa Allah ha u naxariistee Maxamuud Gaani oo u socday magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Todobaatameeyadii ma jirin laami ka taga gobolada Bari iyo Sanaag oo ku darsama jidka dheer ee Shiinaha ee ka yimaada magaalada Muqdisho.
Maalintaan ka baxnay gobolka Sanaag oo anu sii marnay buurta halista badan ee Dameer, oo aanu sii dhaafnay Daarcad, markii danbena gaarnay Taleex, ayaan horay uga sii soconay safarkayagii ilaa aanu gaarnay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal goor danbe oo habeenku sii dhamaanayo.
Kuma sii hakan Garowe, safarkayagii ayaan horay u sii wadanay anaga oo sii dhaafnay sadexda gobol ee Nugaal, Mudug, iyo Hiiraan.
Maalintii Afraad oo habeenkaa seexanay Janta ku dishi ee bariga ka xigta degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, ayaanu galabtaas waxaanu gaarnay degmada Jowhar ee gobolka Shabeelaha dhexe.
Markii aanu soo gaarnay Jowhar, gaarigii aan la soconay waxa loo leexiyey barxadda weyn ee saldhiga booliiska degmada Jowhar, oo aan ka fogayn huteelka dalxiiska iyo Boosteejeda laga raaco gowaarida aadaysa warshadda Sonkorta ee xaafadda Horseed,
Rikaabkii gaariga sarnaa waxa lagu amray in gaariga ka soo degaan oo horay u soo qaataan boorsooyinkooda, Dareewalkii gaariga waday oo lagu magcaabi jiray Ina Dalmar isagana anaga oo maqlayna ayaa lagu amrya in gaarigan la saarayo Sonkor loo qaadayo Ciidamda. markaas looma sheegin ciidamadu halka ay joogaan.
Taliyihii saldhiga haystay markii danbe wuxuu noo sheegay in gaarigu aadayo meel maalmo loo sii soconayo, sidaas awgeed aad idinku noqotaan kuwo iyagu is dabira siday Muqdisho u tegi lahaayeen .
Maxamed Cabdi, oo dhowr mar oo hore Muqdisho yimid. ayaa hal mar wuxuu yiri war ina keena Siteey ma noogto ayaan meelahaa ka eeganaynaa . Siteey ma noogto waa gaari yar oo magaalada Muqdisho keeni jiray caanaha oo si xun loo soo rari jiray. Anaguse ma aqoon intayada badani
Gaari Siteey ma noogto ah oo Muqdisho u socday ayaanu helnay oo ka yimid magaalooyinka Mahday iyo Buurane oo caano ku raran yihiin iyo dad aad u badan. Gaarigii ayaa anuguna isku sii ciriirinay.
Markaan wax yar soconay oo aanu weli gaarin magaalada Qalimoow, ayaa nin ka mid ahaa rikaabkii ka yimid Buurane, wuxuu ku yiri mid ka mid ah rikibaakii ka yimid gobolka Sanaag ” iga siko” oo ah iga durug ama Boowe waa i ciriirisay
Intaanu jawaabin rikaabkii reer Sanaag, sida muuqatayna uuna fahmin hadalka lagu yiri macnihiisa, ayaa waxa soo booday adeer Cali oo ku jawaabay hadalkan ” Adeer Isaga oo Siisoow soo raacay ayaad intaad Sitaay ma noogto soo saarteen ugu sii daraysaan sii siko. Sikan maayo ee halka uu fadhiyo ayuu Barkinta dhiganayaa?
← Abu Jihaad oo garoonka Aadan cade lagu xiray Allah ha u naxariistee Axmed Diiriye oo geeriyooday →